Malunga nathi-XIAMEN GACHN COCHNOLOGY CO., LTD.
Itekhnoloji ye-Gachn (Ikhowudi ye-stock: 832368)igxile kulawulo lwezixhobo ezikrelekreleyo zemveliso kwaye izabalazela ukwenza isisombululo esenziwe ngomsila esiyinyani kubaxumi bethu. UCachn udlale indima ebaluleke kakhulu ekufayilweni koomatshini bokufaka amaphepha kwizixhobo ngokuhambisa umdlalo kwitekhnoloji yakhe ekhokelayo nakwimiphetho yenkonzo.
Itekhnoloji ye-Gachn Uphendula ngamandla kwi-Strategic yase-China ngo-2025 ubuchule besizwe, ijolise kwimikhwa yezixhobo zokwenza izinto ngobukrelekrele kwaye ibeka inkanuko kunye nomzamo wokuguqula “umzi-mveliso ungacwangciswanga” uyinyani kubathengi bethu.
Okwalo mzuzu ngela xesha, phantsi kwophawu lwe-GACHN ®, sinomatshini wokubala wokukhuphela ozenzekelayo kunye nomatshini wokupakisha isisombululo sokuguqula isetyenziselwa iimveliso ezinjenge-napkin yococeko, i-diaper yosana kunye neyomileyo kunye neyomanzi njl njl njl njl. Ngaphezulu koko, siceba ukongeza ukufakelwa kokutya kunye nokupakisha izinto zokuthambisa kwiphothifoliyo yethu yemveliso.
Itekhnoloji ye-Gachn yasekwa ngonyaka ka-2011. E-Gachn, sinamathela "kwintengiso ejolise kubathengi" kushishino ngalo lonke ixesha. Unyaka ngamnye ngaphezulu kwe-10% yengeniso yonyaka iya kutyalo-mali lwe-R & D. E-Gachn, sibeka wonke umphefumlo wethu kunye nengqondo ukuvelisa ixabiso kubathengi. Ngu dong kunjalo, iimveliso zentengiso ye-GACHN ® kunye neenkonzo zamkelwa ngokubanzi kwimarike. Ukubuya, inkampani ikwaye namava okukhula okumangalisayo kunye nokukhula kwengeniso yonyaka ngaphezulu kwama-50%. Ukuza kuthi ga ngoku, inkampani inomveliso ngonyaka ngamnye wokuvelisa imveliso yeeseti ezingaphezu kwama-200. Kwiminyaka edlulileyo, uGachn uziphuhlise waba ngumatshini wokupakisha okhethiweyo kunye nomthengisi wezixhobo kumashishini asekhaya enza amaphepha.
Umgaqo-nkqubo weshishini: Ukugxila kumthengi
Umthunywa: Ukuvelisa iimveliso ezifanelekileyo ngokugqibeleleyo kunye nokudala i-valus yabathengi.
Umbono wethu: Kukuba lelona uphawu liphambili kwihlabathi liphela.
Iinqobo ezisemgangathweni: Ubulungisa, ukubaleka, ukugqibelela, ukuphumelela
Ukungakhethi: kukhuphiswano olungenamkhethe, funa inyaniso kwiinyani
Ukubaleka: Ukuba ngumzekelo, othandekayo ekuthabatheni uxanduva, chanllange imigaqo
Ukugqibelela: ukuphuculwa okuqhubekayo, yenza ukugqibelela ngakumbi, ungaze uyeke ukuqhubela phambili
I-win-win: win-win with wateja, win-win with staff, win-win with suppliers.
Imveliso yokunkqonkqoza ye-Gachn Technology kunye nezisombululo zokupakisha:
1、umatshini wokubala wokufaka ngokuzenzekelayo kunye nezisombululo zokupakisha zepaneli zococeko kunye neepanty liners
2 、 umatshini wokubala wokufaka ngokuzenzekelayo kunye nezisombululo zokupakisha idayari yabantwana
I-3 、 Isantya esiphezulu esimanzi esosula umgca kunye nemveliso yamaqhekeza amaninzi, umatshini wokubala-ukubala
4 、 Umatshini wokufakelwa kweethishu ebusweni obuthambileyo ngomatshini kunye nomgaqo ombaxa omabini, umatshini wokufaka izicubu zesikhwama
5 、 Isantya esiphezulu, ukubala ukufakelwa kwempahla yokufakwa kwendlu yangasese
I-6 、 Ukuveliswa kwesantya esiphakamileyo kunye nomgca wokupakisha kwimaski yobuso, isantya esiphezulu sokugcwalisa imaski yobuso kunye nomatshini wokutywina
Ukuqhubeka nenqanaba lentengiso, sihlala siziphucula kwaye zisenza siphelele.
Samkela ngokufudumeleyo abahlobo bethu kwihlabathi liphela ukuba banxibelelane nathi ukuze basebenzisane nathi kwishishini elide. Ukulangazelela phambili ekusekeni intsebenziswano yokuwina kunye nokuphumelela nani kungekudala!